Hurumende Yokurudzirwa Kubatsira Vakaparadzirwa Misha neOperation Murambatsvina
HARARE — Rimwe remasangano anoshanda akazvimirira mukurwira kodzero dzevanhu pasi rose rinoti kupasiswa kwechisungo chekuchengetedza pamwe nekubatsira vanhu vakasiyiswa misha yavo kuchasungira hurumende kubatsira vose vakaparadzirwa misha yavo munguva yeOperation Murambatsvina muna 2005.
Amnesty International inoti chisungo cheAfrican Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons chinosungira hurumende kubatsira vose vakaparadzirwa misha yavo munguva yeOperation Murambatsvina mugore riri.
Mukuru wesangano iri muZimbabwe, VaCousin Zilala, vati chisungo ichi chakakosha uye hurumende inofanirwa kuona kuti chaiswa mubumbiro remitemo yenyika.
VaZilala vati nyika yange isina mutemo unosungira hurumende kubatsira vanhu vakasiyiswa kana kuparadzirwa misha yavo.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamboedza kubatsira vanhu vakasiyiswa kana kuparadzirwa misha neOperation Murambatsvina, kana nezvimwe zvirongwa, iri kutadza kubatsira vanhu ava zvakakwana.
Muna 2005 vanhu vanodarika mazana manomwe ezviuru vakasara vasina pekugara mushure mekuparadzirwa misha pasi peoperation murambatsvina.
Pane vamwewo vakawanda, zvikuru vakasiya misha yavo nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika kana mabasa ebudiriro zvakaita sekubviswa kwakaitwa vanhu kuminda yemangoda kwaChiadzwa.
Vaimbove mumiriri weZengeza mudare reHouse of Assembly, VaCollin Gwiyo, vanoti kunyange hazvo paramende yakapasisa chisungo ichi, zvakakosha kuti hurumende iise mari parutivi kuti chitevedzwe.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekuchengetedzwa kwevanhu, Amai Paurina Mpariwa Gwanyaya, vati chimwe chezvinangwa zvechisungo ichi kuumba mitemo inoita kuti vanhu vasabviswe munzvimbo dzavanogara kana kusiiswa misha yavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
MuAfrica mune vanhu vangangosvika mamariyoni gumi vakasiyiswa misha yavo zvikuru sei nekuda kwehondo nemhirizhonga munyika dzavo.